लुडो खेल्न नदिएपछि एक युवकको हत्या ! || समाचार
लुडो खेल्न नदिएपछि एक युवकको हत्या !
Dharana news समाचार
access_time 11 Nov 2019
जनकपुरधाम / लुडो खेल्ने विषयमा विवाद हुँदा एक युवकको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका वडा नं २ पकडीगोठमा लुडो खेल्ने विषयमा विवाद हुँदा एक युवक उपर रड प्रहार गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । स्थानीय विकाउ भन्ने अन्दाजी बर्ष २४ का विकास कुमार साहलाई स्थानीय सँतोष कुमार झाले रड प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
विष्णु गाउँपालिका वडा न२ पकडिगोठमा गत शुक्रबार साधारण लुडो खेलको विवादलाई लिएर झगडा भएको थियो । गाउँलेहरू मिलेर छुट्टाउन प्रयासले झगडा झुटेको झन्डै २० मिनेट पछि विवाद उग्र भएर झडपको रुप लिएपछि घटना भएको जनाइएको छ ।
आरोपित झाले साहको टाउकोमा रड प्रहार गरेपछि उनी तत्कालै बेहोस भएका थिए । बेहोस भएपछि उपचारको लागि वीरगँज अस्ताल लगेपछि उपचारको क्रममा उनको मृत्यू भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार साहको हत्या आरोपमा सँतोष झालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार द्दिपक्षिय झगडाको क्रममा झडपको रुप लिएपछि आरोपित झाको पनि घाईते भएका छन् । उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा राखिएको छ भने अनुसन्धान अगाडी बढाइएको हो ।